Kedu ihe bụ ihe La Niña | Netwọk Mgbasa Ozi
Ikekwe ị nụla gbasara ihe gbasara ihu igwe nke akpọrọ El Niño n'afọ gara aga. Ihe nwere ike ịbụ na ịmaghị bụ na enwere ihe dị iche na - anabata aha La Niña nke ahụ na-apụtakarị na ụbọchị ndị a, ozugbo ihe ịtụnanya El Niño kwụsịrị.
Mgbe ahụ aga m agwa gị ntakịrị ihe banyere La Niña na nke mmetụta ọ na-emepụta n'akụkụ dị iche iche nke ụwa.
Ihe omume La Niña na-ewetakarị oke okpomọkụ na oge siri ike nke oké ọkọchị na mpaghara ndị dị nso na Pacific. Ọ na-adịkarị ọnwa ole na ole ma bụrụkwa nke kpụ ọkụ n'ọnụ mere n'afọ 1988/1989.
Banyere mmetụta ọ na-ewepụta, ọ bara uru ịkọwapụta ike ikuku ifufe na-eme ka oke osimiri belata na mpaghara Colombia, Ecuador na Peru. Enwere oke okpomọkụ na oke osimiri nke mpaghara mpaghara Pacific nke n’enweta igwe ojii na oke mmiri ozuzo.
Ihe omuma La Niña di ike karie ka ogwara oge na mmetụta kasịnụ na-apụtakarị na ọnwa mbụ nke ihe a. N'adịghị ka El Niño, La Niña na-eme obere oge na nkeji oge 4 ruo 7.
Dabere na ozi kachasị ọhụrụ sitere n'aka ndị ọkachamara n'okwu a, ihe El Niño na-agbasa dị ka oke osimiri dị jụụ, Otú ọ dị, eziokwu a bụ ihe na-egosi ọbịbịa nke ihe atụ ndị a kpọtụrụ aha na mbụ La Niña. Amụma nke ndị ọkachamara gbasara ihu igwe adịghị mma ma ọ dị ka La Niña nwere ike gbanwee karịa El Niño n'onwe ya. Anyị ga-echere izu ole na ole iji mara ịdị ukwuu nke ihe a kpam kpam na-emegide ihe ama ama El Niño.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Gịnị bụ ihe La Niña?